Ampielezo ny fitiavana
DMCA Fanamarihana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona
ManyToon dia mpamatsy serivisy an-tserasera araka ny voafaritry ny lalàna Digital Millennium Copyright.
Izahay dia mandray an-tsakany sy an-davany ny zon'ny tompon'ny zon'ny mpamorona.
Raha tompon'ny zon'ny mpamorona ny zon'ny mpamorona izay hita ao amin'ny tranokala ManyToon ianao dia tsy nanome alalana ny fampiasana ny votoatiny dia tsy maintsy ampahafantarinao an-tsoratra izany mba hahafahantsika mamantatra ny voalaza fa manitsakitsaka ny votoatiny ary mandray andraikitra.
Tsy afaka handray hetsika izahay raha toa ka tsy manome aminay ny fampahalalana takiana, azafady mba mifandraisa aminay, azonao atao ny manao fanamarihana an-tsoratra amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny fanamarihana an-tsoratrao dia tsy maintsy misy ireto manaraka ireto:
Famantarana manokana momba ny asa zon'ny mpamorona izay lazainao fa voarindra. Raha milaza ny tsy fanarahan-dalàna ireo asa-zon'ny mpamorona manana zon'ny mpamorona ianao miaraka amin'ny fampandrenesana iray dia tsy maintsy mametraka lisitr'ireo solontena izay manondro manokana ireo asa rehetra ekenao ianao fa voataona.
Famaritana manokana momba ny toerana sy famaritana ny fitaovana izay ambara fa mpanota na ho anton'ny hetsika fanitsakitsahana misy fampahalalana feno amin'ny antsipirihany hamela anay hahita izany. Tokony ampidirinao ny URL na URL manokana ao amin'ny pejin-tranonkala izay misy ny zavatra lazaina fa mpanitsakitsaka.
Ampy tsara ny fampahafantarana mba hahafahantsika hifandray amin'ny antoko mitaraina izay mety misy anarana, adiresy, laharana an-tariby ary adiresy mailaka elektronika izay mety hifandraisana amin'ireo antoko mitaraina.
Fanambarana iray fa ny antoko mitaraina dia manana finoana matanjaka fa ny fampiasana ny fitaovana amin'ny fomba fitarainana dia tsy nahazo alàlana avy amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona na mpamorona azy.
Fanambarana fa ny fampahalalana ao amin'ny fampandrenesana dia marina, ary amin'ny alàlan'ny fanamelohana dia ny fahefana mitaraina dia manome alalana hanao asa ho an'ny tompon'ny zo tokana izay lazaina fa manitsakitsaka.
Ny taratasy fanamarihana an-tsoratra dia tokony halefa any amin'ny manampahefana voatondro ho antsika toy izao:
Email Email DMCA AGENT: [mailaka voaaro]